Xiaomi Mi Band 6: GPS, sensor oxygen oxygen ary mifanaraka amin'ny Alexa | Androidsis
Raha miresaka momba ny fametahana fehin-tànana isika dia mila miresaka momba ny Xiaomi Mi Band, ilay fehin-tànana manisa izay manome ny sandam-bola farany tsara indrindra eny an-tsena. Ny taranaka ho avy izay avoakan'i Xiaomi eo amin'ny tsenan'ity fehin-tànana ity dia hampiditra zava-baovao marobe.
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Magical Unicorn dia nanamafy ny fisian'ny taranaka manaraka ny Xiaomi's Mi Band range, izay ho isa 6, ary ny anarany dia any Pangu ankehitriny. Ao amin'ny firmware izay hiditra ao anatin'ity maodely ity dia nahita ny sasany amin'ireo zava-baovao farany izay ho tonga miaraka amin'ity kinova vaovao ity izy ireo.
Magical Unicorn dia nahita sombin-kaody izay manondro fa ny Mi Band 6 dia hanana puce GPS, sensor oxygen oxygen ary koa hifanaraka amin'ny Alexa's Amazon.
Hitan'izy ireo ihany koa ny fanondroana ireo fiofanana vaovao 19 izay ho azon'ny fehin-tànana atao fanaraha-maso:
Skating amin'ny ranomandry ao anaty
Raha voamarina ireo angon-drakitra rehetra ireo, izay azo inoana indrindra, ity fanavaozana ity no ho zava-dehibe indrindra izay noraisin'ity maodely ity hatramin'ny nanombohany tamin'ny tsena.
Ny fanolorana rafi-pandrefesana haavo oksizena amin'ny rà sy ny fanarahana ny asan'ny mpampiasa GPS no ho tanjany matanjaka indrindra, na dia tsy azontsika atao aza ny manadino ny mifanentana amin'ny Amazon's Alexa.
Na dia aleon'ny mpampiasa Android manana ny Google Assistant aza dia efa manomboka ny fampidirana Alexa. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra izay daty fampisehoana an'io fehin-tànana vaovao io, fehin-tànana, ny kinininy teo aloha, ny Mi Band 5, dia natomboka teny an-tsena tamin'ny tapaky ny taona 2020 ary hitantsika ao amin'ny Amazon30 euro mahery monja.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi Mi Band 6: GPS, sensor oxygen oxygen ary mifanaraka amin'ny Alexa
Ny fiasan'ny electrocardiogram sy ny tosidrà ao amin'ny Galax Watch 3 sy Active 2 dia ho tonga any Espana amin'ny faran'ny volana febroary
Mamorona fanjakana nofinofisinao nofinofy ao amin'ny Cookie Run: Kingdom